रायोमा कुन कुन तत्वहरु वढी मात्रामा उपलब्ध हुन्छन् ? – Nayadhar
रायोमा कुन कुन तत्वहरु वढी मात्रामा उपलब्ध हुन्छन् ?
बुधबार, जेठ २२, २०७६ | ७:३७:२६ |
१) रायोको लागि कस्तो हावापानी उपयुक्त हुन्छ ?
२) नेपालमा यसको खेती कुन कुन क्षेत्रमा गरिन्छ ?
३) रायो जस्तै सागबाली अन्तर्गत पर्ने अन्य तरकारी वालीहरु कुन कुन हुन् ?
४) रायोलाई कुन कुन रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
५) रायोमा कुन कुन तत्वहरु वढी मात्रामा उपलब्ध हुन्छन् ?
६) यसको खेती कस्तो माटोमा गर्न उपयुक्त हुन्छ ?
७) नेपालमा रायो खेतीका लागि कस्ता जातहरु सिफारीस गरिएका छन् ?
८) भौगोलिक क्षेत्र अनुसार कुन कुन जातहरु कुन क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ ?
९) खुमल चौडा पात जातको विशेषताहरु के के हुन् ?
१०) रातो पात हुने रायोको जातको नाम के हो ? यसको खास विशेषता के छ ?
११) के उच्च तापक्रममा पनि छिटो डुकु नहाल्ने जात नेपालमा पाइन्छ ? पाइन्छ भने कुन कुन हुन्? यस्ता जात नेपालमा पाइन्छन् ?
१२) भौगोलिक क्षेत्र अनुसार कुन क्षेत्रमा कुन समयमा वाली लगाउन उपयुक्त होला ?
१३) रायोको खेती गर्दा जमीनको तयारीमा कत्तिको ध्यान पुर्यावउनु पर्दछ ?
१४) प्रति रोपनी जमीनमा मलखादको मात्रा कति चाहिन्छ ?
१५) रायो खेती गर्न प्रति रोपनी जमीनको लागि कति वीउको जोगाड गर्नुपर्ला ? कति दूरीमा बेर्ना सार्दा बढी उत्पादन लिन सकिन्छ ?
१६) अन्य तरकारीवालीको तुलनामा रायोलाई कम गोडमेल गर्दा हुन्छ किन ?
१७) रायोसँग अन्तरवालीको रुपमा अन्य वाली लगाउन सकिन्छ ? अन्तरवालीमा सुहाउने त्यस्ता कुन कुन वाली हुन सक्छन् ?
१८) अल्टरनेरिया थोप्लो रोगका लक्षण कस्ता हुन्छन् ? यसको व्यवथापन कसरी गरिन्छ ?
१९) रायोको पातमा कहिलेकाही चकको धुलो छरिए जस्तो सेतै देखिन्छ के कारणले हो ?
२०) यो वालीमा देखिने सवैभन्दा हानिकारक कीरा मानव स्वास्थ्यलाई हानी नपुग्ने गरी कसरी व्यवस्थपन गर्न सकिन्छ ?
२१) झुसिलकीराको व्यवस्थापनमा सवैभन्दा सजिलो तरीका के अवलम्बन गर्न सकिन्छ ?
२२) रायोमा कहिलेकाहीँ छिट्टै डुकु पलाउने वा छिट्टै फूल्ने समस्या देखिन्छ कारण के हो ?
२३) रायोको एउटा जात लगाउँदा एदाकदा अर्कै जातको गुणरचरित्र देखिन्छ किन ?
२४) तु्सारो वा ज्यादा ठण्डाबाट जोगाई रायो खेती गर्ने कुनै तरिका छ ?
२५) कुन कुन तत्वको अभावमा रायोको पातहरु खुम्चिने गर्दछन् ?
२६) रायो साग सारेपछि कति दिन सम्ममा टिप्न तयार हुन्छ ? टिप्दा खेरी कस्ता कस्ता पात र कसरी टिप्नु पर्दछ ?
२७) रायो टिपे पश्चात राम्रो मूल्यमा विक्रि गर्न यसको ग्रेडिङ्ग तथा प्याकिङ्गमा के सावधानी अपनाउनु पर्दछ ?
२८) सागबाली सकेसम्म ताजा उपभोग गर्न राम्रो हो तर भण्डारण गर्नेपर्ने अवस्थामा कति तापक्रम र आर्दतामा कति दिन सम्म राख्न सकिन्छ ?
सागवाली लामो अवधिसम्म भण्डारण गर्न सकिन्न तथापि ० डि.से. तापक्रममा ९०५ सापेक्षित आर्द्रता कायम गरेर ५–२० दिन सम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । लामो अवधि भण्डारण गरेर राखेको साग स्वादिलो हुँदैन ।
२९) रायो साग प्रति रोपनी कति सम्म उत्पादन गर्न सकिन्छ ?
३०) के रायो सागलाई प्याकिङ्ग गर्न जरुरी हुन्छ र कसरी प्याकिङ्ग गर्नु पर्दछ ?
३१) रायोको साग टिपिसकेपछी इथाईलिन उत्पन्न गर्ने वालीहरुसँग सँगै राख्नु हुँदैन किन ?
४२) रायोमा भाइरस रोगका लक्षणहरु यस्ता हुन्छन् ? यसको व्यस्थापन कसरी गरिन्छ ?
३३) कहिले काहीँ नर्सरीमा रायोका विरुवाहरु फेदै कुही ढल्ने गर्दछन् के कारणले होला र यसको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ ?
३४) रायो खेती लगातार एउटै खेत वारीमा लगाउँदा वोटहरुको वृद्धि नहुने, दिउसो ओइलाउने तर विहान वेलुका सामान्य देखिने के कारणले होला ? यस्तो हुनवाट कसरी वचाउन सकिन्छ ?